Akụkọ - Gini bu ihe di iche n’agbata onodu ojoo, nke adi ire ala na nke anakpo compost?
Plastics plastik na plastik biodegradable bụ gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe ma na-adigide maka rọba ọdịnala nke a na-ejikarị mmanụ ala. "Degradable", "biodegradable" na "compostable" bụ okwu ndị mmadụ na-ekwukarị mgbe ha na-ekwu maka ihe ndị a. Ha yiri ma odi iche.
Mgbe ị na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ, ọ dị ezigbo mkpa ịtụle omume gburugburu ebe obibi, nke metụtara ọgwụgwọ ikpeazụ ya. Ihe na-echegbu onwe ha bụ ndị a na-eji na nkwakọ ngwaahịa nwere ngwa ahịa yana ngwa ahịa ndị ahịa. Ekwesịrị imepụta ihe ndị a ka ha bụrụ ndị na-emebi emebi ma hụ na ha nwere ike mechaa kpochapụ ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị na nke usoro, nke na-enye aka maka nchekwa gburugburu ebe obibi na ihe ọmụmụ. Dịka ọmụmaatụ, ịwekọta plastik na-emebi emebi na akwụkwọ mkpofu na ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe, dịka nsị ubi, nri na ihe ubi, nwere ike ịmepụta nnukwu fatịlaịza carbon (ihe ndị na-eme ka mmiri). Ala nke fatịlaịza ka mma nwere ọtụtụ uru, dị ka ịba ụba ọdịnaya nke carbon, mmiri na nri, belata ojiji nke kemịkal na igbochi ọrịa osisi. N’oge ugbua, otutu mmadu n’eji compost iji kwadobe usoro mmepe nke usoro ugbo. N’ọtụtụ mba, a na-achịkọta ihe mkpofu nri na ihe mkpofu ahịhịa ndị ọzọ iche iche wee mepụta ka ha wee mepụta ihe dị mma dị mma ala na-atụgharị ala nke ga-alaghachi n’ọhịa iji jigide usoro carbon.
N’oge gara aga, e mere ndị polymer ka ha bụrụ ihe anaghị emebi emebi. Taa, ihe ịma aka bụ imepụta polymer nwere ọrụ achọrọ iji ya rụọ ọrụ mana enwere ike ireghari mgbe ejiri ya. Karịsịa, ngwaahịa ndị na-emebi emebi enweghị ike ịbụ nsị ma ọ gaghị adị na gburugburu ebe obibi ruo ogologo oge, mana enwere ike ịgbari kpamkpam site na microorganisms ala dị ka nri na oge ụfọdụ. Iji hụ na ahịa nabatara ngwaahịa ndị na-emebi emebi, enweghị obi abụọ ọ bụla na ihe ndị a nwere ike ibibi na obere oge nke izu na akụrụngwa njikwa ihe mkpofu (kama, enzymes microbial dị na ụlọ ọrụ ọgwụgwọ) nwere ike gbarie / tinye n'ọrụ.
Kaosinadị, ọdịnaya ndị a ezughi ịkọwa n'ụzọ doro anya ọdịiche dị n'etiti plastik "rụrụ arụ", "nke nwere ike ibibi ndụ" na "compostable". Ọzọkwa nkọwa na-nyere n'okpuru.
(1) plastik ndị na-emebi emebi
Plastik rụrụ arụ nwere plastik nke nwere ike iweda ya site na ihe anụ ahụ na nke ndu (ọkụ ma ọ bụ okpomoku, ma ọ bụ omume microbial). Ihe a na-akpọ mmekpa ahụ aerobic (ntụgharị mmebi nke ngwa ngwa site na catalyst ma ọ bụ activator na nnukwu okpomọkụ) ma ọ bụ photodegradable starch polyethylene plastics nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu gburugburu ebe obibi. Ihe ndị a adịghị emebi ngwa ngwa dịka Plastics Compostable ma nwee ike ịhapụ mpekere. Mpepu mmiri nke hydrophobic nke emebi site na mbibi nwere nnukwu ala ma nwee ike ịkwaga na mmiri mmiri na ala. Hydfọdụ hydrophobic na nke ukwuu na-egbu egbu bekee, dị ka PCB na DDT, nwere ike adsorbed na-ejigide na n'elu nke hydrophobic irighiri ihe, nke na-eme ka ọdịnaya nke na-egbu egbu bekee ruru 1 nde ugboro nke ndabere ọdịnaya, nke bụ iji ghọọ usoro njem nke ihe na-egbu egbu na gburugburu ebe obibi. Ya mere, ọ dị mkpa iji hụ na ngwaahịa ahụ na-emebi kpamkpam n'ime obere oge nke ụlọ ọrụ ọgwụgwọ kpebiri.
(2) Plastik plasta
Ihe plastik biodegradable bụ plastik nwere ike ịgbari kpamkpam site na microorganisms na usoro ọgwụgwọ dị ka nri maka ike (n'ime usoro nri). Nke a zuru ezu microbial mgbaze / itinye n'ọrụ kpebisiri ike site na-anwale ma carbon mmewere nke ule plastic nwere ike kpamkpam ghọọ CO2 site na microbial usoro aa cell.
(3) Plastics Compostable
Na mgbakwunye na enwere ike ibibi ihe site na microorganisms, enwere oge a chọrọ maka plastik a ga - akpọ compostable. Dịka ọmụmaatụ, ASTM 6400 (Nkọwapụta maka Plastics Compostable), ASTM d6868 (Nkọwa maka plastik biodegradable maka mkpuchi elu nke akwụkwọ ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike ịkọwapụta) ma ọ bụ en 13432 (nkwakọ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa) na-ekwupụta na ihe ndị a kwesịrị ịghaghachi n'ime ụbọchị 180 na compost ụlọ ọrụ mmepụta ihe. gburugburu ebe obibi. Comlọ ọrụ na-emepụta compost na-egosi na ọnọdụ okpomọkụ akọwapụtara ihe dị ka 60 ℃ na microorganisms ga-adị. Dabere na nkọwa a, Plastics Compostable anaghị ahapụ irighiri ihe fọdụrụnụ nke ga-ewe ogologo oge karịa izu iri na abụọ, enweghị ọla dị arọ ma ọ bụ ihe na-egbu egbu, ma nwee ike ịkwagide ndụ osisi.
Ngwakọta bụ usoro mepụtara na afọ ndị na-adịbeghị anya iji nyochaa biodegradability nke plastik. Ihe kachasi mkpa bu usoro ihe omimi nke na-adabere na nje, actinomycetes na fungi nke ekesara na okike iji kwalite mgbanwe nke ihe ndi ozo bu ihe ojoo. Usoro a dị ngwa, dị irè, dị mfe na kensinammuo iji nyochaa mmebi nke plastik, ma nwee ike igosipụta nsị nke plastik n'okpuru ọnọdụ okike ruo n'ókè ụfọdụ.
Akpa Compostable, Akpa mkpofu Compostable, Kechie Biodgradable Cling Kechie, Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere, Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere, Eco Cling Kechie Sugar Kechie,